-Bangladesh yenza ama-Proteas akusebenzele ukuba ngaphambili kwi-innings yokuqala
i-Bangladesh idlale ngokuzimisela ngosuku lwesithathu lomdlalo we-Sunfoil Test wokuqala e-Senwes Park ngoMgqibelo ukugcina ukuba ngaphambili kwama-Standard Bank Proteas kuncane ukuze bangakuqhubezi kakhulu.
Ngesikhathi ukukhanya kusheshe kwamisa umdlalo, ama-Proteas ebengaphambili kakhulu, beqhubeze ukuba ngaphambili nge-innings yokuqala esuka ku-176 kuye ku-230 besalelwe ama-wicket ayisishagalombili.
Kodwa i-Bangladesh kumele inconywe ngokudlala nesibindi okubabone benqoba i-session yokuqala yomdlalo ekuseni ngesikhathi bethola ama-runs angu-91 kusaphume u-Tamim Iqbal kuphela – elokuqala lomdlali odlala umdlalo wakhe wokuqala, u-Andile Phehlukwayo kuma-Test.
Umdlalo wabo ubuqhutshwe ukushaya ka-Mominul Haque (77 off 150 balls, 12 fours) no-Mahmudullah (66 off 124 balls, 11 fours, 1 six) okube ibona abadlale indima ekubeni nama-partnership adlulile ku-50 amane alandelanayo. Okubi ukuthi akekho kubona okwazile ukuthola ikhulu ebelidingwa i-Bangladesh.
Isikhathi eside bekubukeka sengathi ama-Proteas azoba ngaphambili kancane kuphela baze bahlasela ngebhola lisibili elisha njengoba ama-wicket amahlanu akade esele aphume ngama-runs angu-28.
Kwi-wicket ebidinga isineke kuma-Proteas, u-Keshav Maharaj okade ehola abathole ama-wicket (3/92 kuma-overs angu-27.1) futhi u-Morne Morkel no-Kagiso Rabada abaphosa ngebhola elisha, bathole ama-wicket amabili umuntu emunye.
Siningi isikhathi esisele emdlalweni ukuthi ama-Proteas abekele i-Bangladesh umphumela ofikile ku-400 futhi u-Faf du Plessis uzofuna ukunika abaphosayo ama-overs amaningi ukuthi baqede umsebenzi. Uzofuna ukuthi babenesikhathi esiningi nebhola lesibili elisha okusho ukuthi uzofuna ama-sessions amane okudlala.
u-Amla no-Elgar baqinisa isibambo sama-Proteas kwi-Test yokuqala Nganelisekile ngo-97 - u-Markram u-Markram uqale kahle njengoba ama-Proteas efaka ama-runs Ama-Proteas afuna ukunqoba ama-Test – Rabada uMarkram uzodlala umdlalo wakhe wokuqala kwi-Test series ne-Bangladesh